I-MCSE Yokuqinisekisa Isitifiketi Sokukhiqiza - ITS Tech School
1 Kwangathi 2017
I-MCSE Yokuqinisekisa Isitifiketi Sokukhiqiza
Ochwepheshe be-IT kumele babe nezinto ezifanele nolwazi ukuqinisa nokulawula ukuthengiswa kwezinto ezinike amandla amaklayenti okuphela ukuhola ibhizinisi. Isiqinisekiso sokukhiqiza i-MCSE sinikeza i-IT ithuba lokuqinisekisa ukuhlukahluka kwezici ezivezwe ezinye zezinto eziyinhloko ze-Microsoft, okufaka phakathi i-SharePoint, i-Skype yeBhizinisi, ne-Exchange Server. Ngokuvamile, isiqiniseko sokukhiqizwa kwe-MCSE sifanelekela abafundi ukuba babe nezikhundla, isibonelo, usihlalo ophezulu wezinhlaka, umphathi we-IT, umbonisi wohlaka, ochwepheshe bezinhlaka eziphezulu, futhi lokho kuyisiqalo.
Isiqiniseko sokukhiqiza se-Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) siqinisekisa ukuthi abafundi banalokho okulindelekile ukuhambisa izinhlangano efwini, ukwandisa amaklayenti ukuzuza kanye nokuvumelanisa nezimo, ukunciphisa ulwazi olubi, nokuthuthukisa ukuphepha kolwazi. I-MCSE: Ukukhiqiza, okufana nazo zonke iziqiniseko zezinga eliphansi ngaphansi kwesakhiwo esisha se-Microsoft sokugunyazwa, kwenza abafundi bahlole phezu kweviki lezivivinyo ukuze baphinde baphinde baphinde baqiniseke ngokuvumelana nezidingo zabo.
Ukuze ukwazi ukuqeqeshwa kwe-MCSE: Ukuqinisekiswa komkhiqizo, abafundi kufanele baqale ukuwina i-MCSA: I-Office 365 noma i-MCSA: Ukuqinisekiswa kweWindows Server 2012 njengento ebalulekile. Ngokulandela ukunqoba ukuqinisekiswa okubalulekile, abafundi kumele bathathe ukuhlolwa okunye okuthola ukuthenga i-MCSE: Ukuqinisekiswa komkhiqizo.
I-MCSE: Isivivinyo sokuhlola umkhiqizo sinezivivinyo eziyisishiyagalombili, ezinye zazo zivikelwe yi-CBT Nuggets ezilungiselela.
Ukuhlela nokuthumela iMicrosoft Exchange Server 2016 (70-345)
Ukubheka i-Microsoft SharePoint Server 2016 (70-339)
Ihambisa i-Enterprise Voice nge-Skype yeBhizinisi 2015 (70-333)
Izixazululo ze-Microsoft Skype zeBhizinisi 2015 (70-334)
Izixazululo Zesixazululo se-Microsoft SharePoint Server 2013 (70-331)
I-Advanced Solutions ye-Microsoft SharePoint Server 2013 (70-332)
Izixazululo Zesixazululo se-Microsoft Exchange Server 2013 (70-341)
I-Advanced Solutions ye-Microsoft Exchange Server 2013 (70-342)
I MCSE: isiqinisekiso Ukukhiqiza, eyayimfuqa e 2016 njengoba kufakwe lesi MCSE: isihlonzi, MCSE: Ukuxhumana, futhi MCSE: Imibiko accreditations, eyayibonakala washiya isikhundla sakhe ngoMashi 31, 2017.
Njalo, abafundi abafuna emva isiqinisekiso Uchwepheshe ezingeni kufanele abe neminyaka isipiliyoni abasebenza izinto Microsoft, ikakhulukazi Ihhovisi 3 noma i-Windows Server 365 (noma 2012) amathathu (2016) noma ngaphezulu.
Izinto ezihambisana nezivivinyo ezihambisana nazo zihambisana nazo zonke izivivinyo ezisezikhungweni zezinye izindlela ezakha i-MCSE: Ukugunyazwa komkhiqizo.
Isikhathi esenzelwe ukuhlolwa: Amahora we-2 (imizuzu engu-120) ngokuhlolwa kokubili
Inani lemibuzo: 40-60 * yokuhlolwa ngalunye
Ukuphawula: 700 ** kokuhlolwa ngamunye
Izinhlobo zekheli: Isinqumo esiningi; izinqumo ezihlukahlukene / impendulo eningi; isimo
Ukubhaliswa kwe-Exam: Microsoft Learning noma Pearson View
Kungaba kuhle uma uqaphela ukuthi i-MCSE: Ukuhlolwa kwemvume yokukhiqiza kungase kufinyeleleke ekuhambiseni okuthunyelwe kwe-intanethi.
Iindleko zokuhlola: $ 165 (USD) ukuhlola ngalunye
Izindlela zokulinganisa ezilinganiselwe: Ikhasi ngalinye lokubhalisa lokuhlolwa kwisayithi le-Microsoft linikeza ukukhishwa kwamakhono okulinganisa (ifa elikhululekile) ukulawula ukubuyekezwa nokulungela kwakho.
* I-Microsoft ayisakazisi inani elifanele lemibuzo ehlobene nezivivinyo zayo. Ngakho-ke, ubuningi bemibono umfundi azobona buhlukile uma kwenzeka icala.
** Ngenxa yokuthi ubuningi bombuzo buhlukile, akusilo ngempela ukuthi abafundi kufanele banqobe amaphesenti ayisisekelo e-70 ukuze kudlule ukuhlolwa.
Izivivinyo zeMicrosoft ziyaziwa ukuthi zihlolwa. Abafundi abaningi bathola ukuthi badinga ukuthatha ukuhlolwa okungaphezu kwesisodwa ukuze benze umphumela ophumelelayo. Ngenhlanhla, iMicrosoft iyazi mayelana nezinga lokuhlola elihlobene nezivivinyo zabo, futhi ihlinzeka njalo i-Exam Replay, ivumela abafundi ukuba baphinde bahlole izilinganiso ngezindleko ezincane. Uma kungenenkinga enkulu kakhulu ukuqaphele ukuthi i-Exam Replay kungenzeka ingatholakali kalula. Kulolu suku lokusabalalisa lokuthunyelwe kwamanje, zonke izivivinyo ezihlobene ne-MCSE: Ukukhiqiza kufaka i-Exam Replay, kodwa lokho kungashintsha. Abafundi kufanele bahlolisise ukutholakala kwe-Exam Replay yokugwema ukudlulisela ithuba elikhulu emnyango ovulekile.
Ukugunyazwa kwe-Microsoft MCSE kuvunyelwe isikhathi eside. Njengoba kuboniswe yi-Microsoft, izivivinyo zokuvuselela zifinyeleleka manje kuzo zonke izicelo ze-MCSE ne-MCSD udumo. Izivivinyo zokuqaphela kabusha zihlanganisa izinto ezivivinywe ezithathwe ekuqaleni ukuze zithole iziqu, ngokugxila ngokuqondile emisha yamuva nokushintsha izinguquko. Ngesakhiwo sokuhlola esisha sokukhetha ukuqhubeka nokufundisa, abafundi banethuba lokuthatha ukuhlolwa okukhethiwe kokukhetha kwabo minyaka yonke ukuze "bazuze kabusha" ukuqinisekiswa.
I MCSE: Ukukhiqiza iwukuqinisekisa Uchwepheshe ezingeni Kodwa njengoba umdayisi esithile igunya, bafundzi bangacala kulingisa ukwandisa kuzicelo zabo noma ngena nakakhulu ogxile ku extra Iziqinisekiso Microsoft njengoba yathuthuka esilandelayo.
Ngaphakathi yonke Microsoft, i-MCSE: Ukukhiqiza kusekelwe ukusungulwa the MCSA: Windows Server 2012 kanye MCSA: IHhovisi 365 accreditations, enika abafundi abambalwa ahlobene isiqinisekiso izinqumo:
I-MCSA: I-Office 365 (equkethe izivivinyo ezimbili: 70-346 ne-70-347)
I-MCSA: I-Windows Server 2012 (equkethe izivivinyo ezintathu: 70-410, 70-411, ne-70-412)
I-MCSA: I-Windows Server 2016 (equkethe izivivinyo ezintathu: 70-740, 70-741, ne-70-742)
I-MCSA: I-Windows 10 (equkethe izivivinyo ezimbili: 70-697 ne-70-698)
MCSE: Ukukhiqiza (phequlula lokhu okukhethekile: Exchange Server 2016 noma 2013, SharePoint Server 2016 noma i-2013, noma i-Skype yeBhizinisi)
I-MCSE: I-Platform yamafu kanye nesithinteli (phequlula lokhu okukhethekile: i-Azure, i-Cloud Data Platform, i-Big Data Analytics, i-Windows Server 2016, isakhiwo se-Infrastructure Server, noma i-Cloud Private)
I-MCSD: I-App Builder (phequlula lokhu okukhethekile: I-Azure, Universal Windows Platform, i-SharePoint 2013, noma i-Visual Studio)
Abafundi abathole le MCSE: Ukukhiqiza isiqinisekiso kukhona njalo sysadmins, futhi njengoba nohlaka abaqondisi, kukhona isikhathi esiningi nalokho okwakufuneka ukuze abantu ulwazi kanye namakhono ukubizwa ovulekile emisha kanye wekhasi. Ngakho, ngaphandle kwendawo yonke yaseMicrosoft, abafundi bavame ukungezelela:
I-CompTIA Linux + ne-LPI LPIC-1 (equkethe izivivinyo ezimbili: LX0-103 no-LX0-104)
Izizinda ze-VMware vSphere 6 (eziqukethe ukuhlolwa okulodwa kuphela: vSphere 6 Izisekelo 2V0-620)
LPI LPIC-2 (equkethe izivivinyo ezimbili: 201-400 ne-202-400)
I-VMware vSphere 6 VCP6-DCV (equkethe ukuhlolwa okulodwa kuphela: VCP6-DCV)
I-Payscale.com inikeza ibhukwana lokubuyisela isinxephezelo sokusiza ukuze abafundi banqume izilinganiso ezifanele zokukhokhela ukuvuleka kwemisebenzi ehambisana ne-MCSE accreditations. I-Payscale.com ibika ubuningi bezinkokhelo phakathi kwe-$ 50,075 ne-$ 144,966 yezinkanyezi ze-IT ezithinta noma yikuphi ukugunyazwa kwe-MCSE, kufaka phakathi i-MCSE: Ukukhiqiza. Izingxenye ezivamile kulabo abambe ukuqinisekiswa kwe-MCSE zifaka umphathi we-IT, umphathi we-IT, umphathi wezinhlaka, kanye nezinhlaka eziphezulu zokwakha.
Ukugunyazwa kweMicrosoft kukhonjiswe njengepiramidi, ngezinga ngalinye lokuqinisekiswa ukushayela abafundi ekuqinisekiseni okuphakeme, okuqondile, okucacile. Ngaphansi kwesigodlo seMicrosoft, ochwepheshe be-IT bakhe ukwakhiwa kokufunda ne-MTA (i-Microsoft Technology Associate). Izinga elilandelayo yi-MCSA (i-Microsoft Certified Solutions Associate) ne-MCSD (iMicrosoft Certified Solutions Developer), ehlanganisa okuningi okuqinisekisiwe kakhulu phakathi kwezingcweti ze-IT ezihlinzekwa yi-Microsoft, kuhlanganise ne-Server 2012, i-Office 365, ne-Azure. Ekugcineni, i-MCSE (i-Microsoft Certified Solution Expert) ikhuluma ngesamba esingavamile kakhulu sokugunyazwa esihlinzekwa yi-Microsoft futhi inikeza abafundi ithuba lokudala ubuchwepheshe oboniswe yi-MCSA level level.
Njengoba i-Microsoft ibonisa, ukuvumelanisa okusha kwe-MCSE ne-MCSD (i-MCSE: Cloud Platform kanye ne-Infrastructure, i-MCSE: Mobility, i-MCSE: Idatha yokuPhatha ne-Analytics, i-MCSE: Ukukhiqiza, ne-MCSD: i-AppBuilder) ihlelwe ku-Centers of Excellence, esetshenziswa yi-Microsoft I-Network Partner ukuhlukanisa amakhono akhethekile angabonakali kalula yizici ezimbili kanye namakhasimende. Lezi zitifiketi azidingeki ukuvuselelwa kabusha. Kunalokho, usuku lokufeza lukhombisa ukuthi uhlala wazi kanjani izinguquko emisha.
Unyaka ngamunye, unethuba lokuvuselela ukugunyazwa ngokudlulisa ukuhlolwa kusuka kwi-rundown electives, ubonise intshisekelo yakho ekukhuliseni noma ekwandiseni amakhono akho esikhungweni esinikeziwe se-Centre of Excellence. Njalo uma uthola ukugunyazwa, enye ingqinamba yokuqinisekisa ingeziwe kwirekhodi yakho. Le nqubo ibeka esikhundleni sokuvuselelwa kwamanje okudingekayo kokuthatha ukuhlolwa okuqinisekisiwe okujwayelekile ngezikhathi ezithile (MCSD) noma njenge-clockwork (MCSE) ukugcina imvume yakho ingahambi. Thatha okuningi mayelana nesakhiwo esisha sokuqinisekiswa kwe-Microsoft.
Qala uphenye ezinye izindlela zokulungiselela zeMicrosoft nokuqinisekisa ukuvula ukuvuleka okungcono kakhulu kochwepheshe.
I-MCSE: Ukuqinisekiswa komkhiqizo kubonisa ukufaneleka kwakho nomqondo wokusebenza ngokuphathelene nokufunda okuqhubekayo ngokuhambisana nokuthuthukiswa kweMicrosoft, kufaka phakathi izinto ezivame kakhulu, isibonelo, Exchange Server, Skype yeBhizinisi, ne-SharePoint. Lesi siqiniseko sihamba njengobufakazi bokuqiniseka kwakho kanye nokukwazi ukuphatha izinto eziyisisekelo zemvelo yomsebenzi. I-MCSE yakho: Isiqiniseko sokukhiqiza sizovula ukufakwa kwemisebenzi emangalisayo iminyango evulwayo njengoba uzama ukwanelisa izinhloso zakho zochwepheshe.
I-Microsoft Office 365 ne-SharePoint: Ukuhlanganiswa Okuphelele
Isigaba Esilandelayo Umsebenzi Wokwabelana: Ukuphathwa Nokuthuthukiswa